Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta warqadaha Aqoonsiga ka gudoomay Safriirka Jaban
Home Somali News Somali Government Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta warqadaha Aqoonsiga ka gudoomay Safriirka Jaban
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Ambassador Toshihisa Takata, madaxweynaha ayaa safiirka ka gudoomay warqada aqoonsiga.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ahaa wasiirada arimaha dibadda ahna ra’iisulwasaare ku xigeenka Marwo Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan.
Madaxweynaha ayaa kusoo dhaweeyay xafiiskiisa safiirka,isagoo ka codsaday inay dalka gudihiisa ku shaqeeyaan maadaama haatan uu jiro Amni iyo horumar dhinaca isbedelka ah islamarkaana la isku halleyn karo.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale uga mahadceliyay Dowladda Japan taageerada ay Soomaaliya siinayso.
Danjiraha Dowladda Japan ee Somalia Mr Takata ayaa xusay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Dhawaan safaaradooda ay si rasmi ah uga furtaan caasimadda Muqdisho , isagoo intaasi ku daray in tani ay xoojinayso xiriirka Diplomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo japan maadaama Dowladdu ay haatan tahay mid rasmi ah oo kasoo gudubtay KMG-nimadii.
Waxaa xusid mudan in doowlada Jaban ay kamid tahay doowladaha sida aadka ah u taageera doowlada Soomaaliya, iyadoona ka taageerta dhanka gaadiidka Ciidamada doowlada, iyo Isgaarsiinta.